Zimbabwe power converters - CA
> Power converters for Zimbabwe
Will I need a power converter if I'm visiting Zimbabwe from Canada?
The voltage from a electric outlet in Zimbabwe is different to a US outlet so please bring a if your charger or appliance doesn't support dual voltage.
Will I need a plug adapter for Zimbabwe if I'm from Canada?
Where to buy a power adapter for Zimbabwe in Canada
Do Canadian plugs work in Zimbabwe?
Is an outlet in Zimbabwe the same as Canada?
Is the voltage in Zimbabwe the same as Canada?
Step down power converter - A step down power converter allows a 100-120 volt appliance to be used in a 220-240 volt power outlet, priced C$330-C$340